မိုဘိုင်းဖုန်းများ - g282/270 Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
မိုဘိုင်းဖုန်းများ classified: အသစ် G282/270
Music ကောင်းကောင်းနဲ့ ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ကမ္ဘာသစ်....🎼🎼 ------------------------------------------------- နေ့တစ်နေ့တာမှာ နားကြပ်လေးနဲ့သီချင်းနားထောင်လေ့ ရှိကြသလား??? ပုံမှန်သံစဥ်လေးတွေကြားပျော်မွေ့နေတတ်သူများကတော့ နားကြပ်လက်ကမချဘူးနော်...😉 🔉အသံထွက်အားကောင်းမယ် ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ baseအသံ ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ငြိမ့်လို့ရမယ်ံ နားကြပ်လေးတွေပါနော်... ဒီဇိုင်းကာလာအနေအထားကတော့ ပုံပါအတိုင်းပဲနော် "မြင်သူတိုင်းကြွေ သုံးဖူးသူတိုင်းခိုက်"တဲ့နားကြပ်လေးတွေမို့ ကြိုတင်မှာယူလိုက်တော့နော် 📌အနည်းဆုံး mobile accessories ပစ္စည်းကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်သောင်းခွဲဖိုးယူရပါမယ်နော်....Pre-order စနစ်ပါရှင့်။ ဝယ်ယူအားပေးလိုသူများအတွက် EazyliKyaw Onlineshop ကနေ မှာယူနိုင်သလို Instagram app/ One kyat app များတွင်လည်း အားပေးဝယ်ယူနိုင်ပါပြီနော်... 👉....Mobile Accessories ပစ္စည်းများက နှစ်သောင်းဖိုး အားပေးပါက လက်ကားစျေးပေးအုံးမှာမို့ စိတ်ဝင် စားရင် Page messenger သို့ လှမ်းခဲ့ပါနော်..... 👈 နယ်မြို့များအတွက်ကတော့ order ကြိုတင်ပြီး ငွေကြိုလွှဲစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Preorder ပစ္စည်းများအားတစ်ပတ်နဲ့သုံးရက်အတွင်း🚗ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်နော်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းကတော့အိမ်ရောက်ငွေရှင်း🚗 စနစ်လေးဖြင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်...ကြိုတင်မှာယူရတဲ့ပစ္စည်းလေးများကိုတော့ တစ်ပတ်အတွင်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်✈ "သင့်တင့်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊ မှန်ကန်သောပို့ဆောင်မှုတို့နှင့်အတူ နွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ" Page Link https://www.facebook.com/EazyliKyaw.forever/ #EazylikyawOnlineShop #onlineshopping #Qualitiesgood